Israely - Wikipedia
I Israely na Isiraely dia firenena ao amin’ ny faritra Atsinanana Akaiky, any Azia. Ny renivohiny dia i Jerosalema. Ny tanàna lehibe indrindra dia i Jerosalema raha ampidirina ao i Jerosalema Atsinanana. 20 770 km ny velarantaniny ary 8 847 400 ny isan' ny mponina ao aminy araka ny fanisana natao tamin' ny Avrily 2018. Ny faritr' ora dia +2.
Sainan' i Israely
Sarin-tanin' i Israely
I Israely dia manana morontsiraka ao amin’ ny ranomasina telo, dia ny Ranomasina Mediteranea ao avaratra, sy ny Ranomasina Maty ao atsinanana, ary ny Ranomasina Mena ao atsimo (izay ampifandraisin’ ny Hoalan' i Aqaba). Na dia eo aza ny tany efitr’ i Neguev (izay mameno ny antsasa-manilan’ ny tanin’ i Israely), dia novolena hazo maniry miisa 200 tapitrisa any ho any nanomboka tamin’ ny taona 1948.
Mihoatra ny 80 %n’ ny Israeliana ny Jiosy, fa ny 20 % kosa dia Arabo. Anisan’ ireo firenena manan-karena indrindra eto an-tany i Israely raha ny fidiram-bolan’ ny isam-batan’ olona no jerena.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Israely&oldid=1046067"
Dernière modification le 30 Jiona 2022, à 11:41
Voaova farany tamin'ny 30 Jiona 2022 amin'ny 11:41 ity pejy ity.